Fifidianana ben'ny tanana sy mpanolotsaina :: Amin'ny 26 septambra no hamoaka ny lisitra ôfisialin'ireo kandidà ny Ceni • AoRaha
Mitohy ny fanamarinana an’ireo antontan-taratasy filatsahan-kofidian’ireo kandidà ben’ny tanàna sy mpanolotsaina, izay handray anjara amin’ny fifidianana hatao amin’ny 27 novambra hoavy izao. Havoaka isaky ny faritra ny lisitra ôfisialin’ireo kandidà, ka ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) any amin’ny faritra no hiandraikitra an’izany. Nampahafantarina tetsy anivon’ny Ceni Alarobia, afak’omaly, fa amin’ny 26 septambra farafahatarany no daty hamoahana an’ireo lisitra ireo. Aorian’io indray no hanatontosana ny antsapaka hamaritana ny laharan’ireo kandidà sady hanamboarana ny endriky ny biletà tokana.
Hidina any amin’ny faritra kosa ireo mpiasa avy ao amin’ny Ceni foibe, mandra-pahatonga an’io daty io. Izy ireo indray no hanohy ny asa fanamarinana satria tapitra omaly ny anjaran’ny Rafitra misahana ny fanaraha-maso ny filatsahan-kofidiana isaky ny distrika (Ovec).
Sokajin’olona hilatsaka hofidiana ben’ny tanàna miisa dimy no eto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua). Miisa dimy ihany koa ny kandidà mpanolotsaina. Ankoatra izay, nolazain’ny filoha lefitry ny Ceni, Andriamanantsoa Philibert Hervé, fa kandidà ben’ny tanàna miisa efatra avokoa no voarakitra any Antsiranana, Fianarantsoa ary Toamasina. Kandidà miisa valo ny an’ny faritra Toliara ary dimy ny any Mahajanga. Mbola tarehimarika vonjimaika ihany ireo hatreto.
Fivezivezen’ny mpampianatra :: Toherin’ny SECES ny teny midina avy amin’ny minisitera